FANDRAVANA LALAO : Nakorain’ireo mpijery ny Ben’ny tanànan’Antsiranana
"Raiamandreny tokony ho maodely indray no nanao ny tsy tokony hatao". Izany no ventin-dresaka aty Antsiranana manoloana ny fihetsika nataon’ny Ben’ny tanànan’Antsiranana tao amin’ny kianja monisipaly, ny alahady 17 janoary teo. 19 janvier 2021
Araka ny vaovao voaray dia noravan’ ity tompon’andraikitra ao amin’ny kaominina Antsiranana ity, ny lalao famaranana baolina kitra "tournoi fanamby" izay hiadiana amboara omby roa.
Raha tsiahivina dia efa notaterina teto fa niady totohondry ity Ben’ny tanànan’Antsiranana ity nandritra ny lalao manasa-dalana, ny alahady 21 desambra lasa iny. Izao indray noravany tanteraka ny lalao. Araka izany dia maneho ny alahelony ireo mpankafy baolina kitra aty Antsiranana, izay nandoa vola tamin’ny fidirana. Tsy vitan’izany fa teny feno fanamparam-pahefana no nataon’ny Ben’ny tanàna, izay nilaza fa azy ny kianja ary izy no mandidy sy manapaka ao.
Araka ny fitantaran’ireo olona izay nijery baolina fa ny hanoloana ilay mpitsara afovoany izay nanao hadisoana nanome karatra mena mpilalao tamin’ny ekipan’ny "Génération zatovo Diégo" izay nifanandrina tamin’ny ekipan’ny "Cosa kaominina Antsiranana" no nahatonga ny disadisa.
Voalaza fa tsy neken’ny Ben’ny tanàna ny hanoloana ity mpitsara izay nohafarana avy any Nosy Be ity.
Araka ny voalaza hatrany dia nifamaly tamin’ny Raiamandreny iray tao ihany koa ingahy Ben’ny tanàna ary tsy nitsitsy teny navoaka. Araka ny fantatra dia mpilalao hafa no nanao hadisoana ka lasa iray hafa izay efa nahazo karatra mavo no voatondron’ilay mpitsara afovoany ka lasa nahazo karatra. Nandritra izany dia lasa mpilalao 10 ny an’ny ekipa Génération zatovo Diégo, nifanandrina tamin’ny ekipan’ny kaominina Antsiranana izay nahitana mpilalao 11. Nojabahin’ny Ben’ny tanànan’Antsiranana, araka izany, ny lalao ary niafara tamin’ny fandravana tanteraka ny lalao famaranana “tournoi fanamby”.
Manoloana ny fihetsika nataon’ny Ben’ny tanàna ity dia nakorain’ireo mpijery baolina kitra ity farany, izay nanehoana ny tsy fankasitrahana ny fihetsika feno fanamparam-pahefana nataony. Tavela resabe aty Antsiranana hatramin’izao anoratanay izao ny fihetsika nataon’ny Ben’ny tanàna, ary samy amin’ny resaka nifanaovany avy ny tsirairay. " Normal edy maire-ntsika ity sa tsy nampoiziny ny fahazoany fahefana ka lasa magnantsôntsagna magnano tsy fanao", hoy ny tanora iray izay anisany sorena nahita ny fihetsika nataon’ny Ben’ny tanàna ity.
Raha tsiahivina dia tsy zava-baovao ny fahitana ity tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny kaominina ambonivohitra Antsiranana ity mitabataba mifamaly aman’olona taty Antsiranana. Raha ny zava-misy no resahina dia azo ambara fa diso safidy izay nifidy azy satria mahamenatra ny mahita Raiamandreny izay heverina tokony hananatra indray no nanondrana teo imasom-bahoaka.
Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (429) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (160) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (72) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (70) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (64) 2 mars 2021 Vehivavy iray maty tao Nosy Be, mitontaly 83 ireo marary CORONAVIRUS ATY DIANA (50) 2 mars 2021